Newsofexile.com: July 2009
Posted by अर्जुन प्रधान at 3:24 AM No comments:
Posted by अर्जुन प्रधान at 11:53 PM No comments:
Posted by अर्जुन प्रधान at 6:23 AM 1 comment:
Posted by अर्जुन प्रधान at 5:17 AM No comments:
शिविरमा आतङ्क फैलाउने हामी होइनौं ।
भूटान कम्यूनिष्ट पार्टी (मालेमावादी) का केन्द्रिय संस्थापक सदस्य क.विज्ञानसँग इमेल अर्न्तवार्ता यस प्रकार छ ।
भूकपा मालेमाको विकासक्रम र स्थापना ?
- सन् २००१ को ७ नभेम्बरमा भूटानको एक ग्रामिण इलाकामा उत्पिडित जनताको उपस्थितिका वीचमा स्थापित भयो । यस अघिदेखि नै पार्टी निर्माणको आधारका निम्ति हामी धेरै भूटानी कम्यूनिष्टहरुले गाँउ-शहरहरु भ्रमण गरेका थियौं । त्यसका निम्ति साँस्कृतिक अभियानहरु, विचारगोष्टी, छलफल, अर्न्तकृया र विविध कार्यक्रमहरु सञ्चालन भए । समग्रमा बैदेशिक प्रतिकृयावादको आडभरोसामा टिकेको बर्षौं पूरानो एकात्मक सामन्ती राज्यप्रणालीलाई सदाका लागि अन्त्य गरेर नौलो जनवादी भूटान निर्माणको अपरिहार्यतालाई संष्लेशित गर्दै मालेमावादको मार्ग निर्देशनमा जनवादवाट समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने यूगान्तकारी पहलकदमीलाई ब्यवहारमा बद्ल्यौं । फलतः भूटानी सर्बहारावर्गको अपार माया तथा तमाम नेता कार्यकर्ताहरुका क्रान्तिकारी इच्छाशक्तिका कारण पार्टी तीब्र गतिमा अघि बढ्यो ।
पछिल्लो चरणमा पार्टी दुइ खेमा भएको प्रचार छ नि ?
-हामीले महान् साम्यवादको सपना बोकेका छौं । त्यसलाई साकार पार्नका निम्ति मार्क्सवाद, लेलिनवाद, माओवाद बाहेक अरु कुनै पनि विचार, सिद्धान्त र दर्शन अवैज्ञानिक ठहर्दछ । तत्कालीन पार्टी प्रमुख विकल्प छद्म अवसरवादबाट वर्ग समन्वयबादी संसोधनवाद हुँदै प्रतिकृयावादमा पतन भइसकेपछि हामीले गद्दार विकल्पको चिहान खन्नुको विकल्प केही देखेनौं । क्रान्तिकारी पार्टीको नेतृत्व क. विराटको हातमा इतिहासले सुम्पियो र गद्दार विकल्पलाई गोडाबाट खसाल्यो । यसमा भ्रमित हुने कुनै कारण छैन किनकि आँखाको कसिंगर फालिनु हाम्रो लागि हितकर छ ।
अधिकांश भूटानी तेस्रो देशमा पलायन भए, अब कसरी विश्वास जित्नु हुन्छ ?
-हामीले के कुरा बुझ्न आवश्यक छ भने शरणार्थी समूदयमात्र भूटानी होइन् । निश्चित रुपमा शरणार्थी समूदायले भूटानी नागरिकको संज्ञा पाउनु स्वभाविक हुन सक्छ संख्याको हिसाबले र हिस्सा ओगटेको स्विकार्नु पर्छ । परन्तु राज्य ब्यवस्था परिवर्तनको बाहकशक्ति देशभित्रका जनता नै हुन् । यद्यपि, शरणार्थी समूदाय कर्तब्यविमुख भएर पलायन हुनुभन्दा क्रान्तिमा कुनै न कुनै भूमिका निर्वाह गर्नु महान् ठहर्दछ । मुठी दिएर मुरी लुट्ने राजा बाद्शाहहरुका राहत श्रमिकहरुका निम्ति सधैं अधुरो हुन्छ र अस्तित्वविनाको जीवन विलोपिकृत हुने निश्चित हुन्छ । आगामी दिनमा महान् जनयोद्धाको उठान र विकाशको गतिले संसारका विभिन्न देशहरुमा रहेका भूटानी नागरिकहरुको समेत हामी मन जित्ने छौं।-हामीले के कुरा बुझ्न आवश्यक छ भने शरणार्थी समूदयमात्र भूटानी होइन् । निश्चित रुपमा शरणार्थी समूदायले भूटानी नागरिकको संज्ञा पाउनु स्वभाविक हुन सक्छ संख्याको हिसाबले र हिस्सा ओगटेको स्विकार्नु पर्छ । परन्तु राज्य ब्यवस्था परिवर्तनको बाहकशक्ति देशभित्रका जनता नै हुन् । यद्यपि, शरणार्थी समूदाय कर्तब्यविमुख भएर पलायन हुनुभन्दा क्रान्तिमा कुनै न कुनै भूमिका निर्वाह गर्नु महान् ठहर्दछ । मुठी दिएर मुरी लुट्ने राजा बाद्शाहहरुका राहत श्रमिकहरुका निम्ति सधैं अधुरो हुन्छ र अस्तित्वविनाको जीवन विलोपिकृत हुने निश्चित हुन्छ । आगामी दिनमा महान् जनयोद्धाको उठान र विकाशको गतिले संसारका विभिन्न देशहरुमा रहेका भूटानी नागरिकहरुको समेत हामी मन जित्ने छौं।
वर्तमान पार्टी गतिविधि के-कस्तो रहेका छन् ?
-हामीले थुप्रै चिजहरु गुमाएका छौं, मुख्यतः विकल्पको गद्दारी र अन्य आत्मगत कमजोरीका कारण, थुप्रै साथीहरु जेलमा हुनुहुन्छ, कोहि वेपत्ता हुनुहुन्छ भने कसैले सहादत प्राप्त गरिसक्नु भयो । यो संवेदनशील घडीमा नयाँ चिजहरुको प्राप्ति, तिनको रक्षा, प्रयोग र विकाश हाम्रो निम्ति प्राथमिक काम बनेको छ । देशभित्र र प्रवासमा नयाँ ढङ्गले पार्टी निर्माण गर्दै शसक्त सैनिकदस्ता निर्माण गरेर महान् जनयोद्धाको उठान् गर्नु हाम्रो वर्तमान अभिभारा हो । आत्मगत र बस्तुगत परिस्थितिलाई क्रान्त्ति अनुकुल बनाउन दृढतापूर्वक अघि बढिरहेका छौं । -हामीले थुप्रै चिजहरु गुमाएका छौं, मुख्यतः विकल्पको गद्दारी र अन्य आत्मगत कमजोरीका कारण, थुप्रै साथीहरु जेलमा हुनुहुन्छ, कोहि वेपत्ता हुनुहुन्छ भने कसैले सहादत प्राप्त गरिसक्नु भयो । यो संवेदनशील घडीमा नयाँ चिजहरुको प्राप्ति, तिनको रक्षा, प्रयोग र विकाश हाम्रो निम्ति प्राथमिक काम बनेको छ । देशभित्र र प्रवासमा नयाँ ढङ्गले पार्टी निर्माण गर्दै शसक्त सैनिकदस्ता निर्माण गरेर महान् जनयोद्धाको उठान् गर्नु हाम्रो वर्तमान अभिभारा हो । आत्मगत र बस्तुगत परिस्थितिलाई क्रान्त्ति अनुकुल बनाउन दृढतापूर्वक अघि बढिरहेका छौं ।
शरणार्थी शिविरमा पर्चा लगायत विभिन्न माध्यमबाट जनतालाई आतङ्कित बनाउने हल्ला सुनिन्छ नि ?
-शरणार्थी शिविरहरुमा हामीले निःशस्त्र र मैत्रीपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं । त्यहाँ विभिन्न रुपमा आतङ्क फैलाउनेहरुसँग हाम्रो पार्टी असहमत छ ।
सयुंक्त क्रान्तिकारी मोर्चा, भूटानसगँ के सम्बन्ध छ पार्टीको ?
-उहाँहरुले देशभित्र सञ्चालन गर्नु भएको छापामार कार्बाहीहरुप्रति हामी सकारात्मक छौं । भौतिक भेटघाट नभएपनि सामन्तवाद, विस्तारवाद र साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षहरु मार्क्सवादको हितमा हुन्छन् ।
वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्वदेश फिर्ती गर्ने भनेको छ नि ?
-यो सरकारको झुट्टा आश्वासन र प्रचारलाई हाम्रो आलोचनात्मक नैतिक समर्थनको औपचारिकता रहन्छ ।
नेपाली राजनैतिकलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
- साहस र विवेकका धनी नेपाली जनताले दश वर्षिय महान जनयुद्धद्वारा पूरानो राज्य सम्यन्त्रलाई धरासाहि बनाउदै १९ दिने जनआन्दोलनका वीचबाट राजतन्त्रलाई इतिहासको संग्राहलयमा थन्काई दिएका छन् । अब नेपालमा क्रान्ति सम्पन्न हुने आत्मगत र बस्तुगत परिस्थिती अनुकुल हुँदै गएको छ । ए.ने.क.पा.माओवादीले संसार भरिका कम्यूनिष्टहरुलाई नयाँ शिक्षा प्रदान गरेको छ । यो शिक्षा सम्वृद्द हुने या नहुने भन्ने कुराको निर्धारण ए.ने.क.पा. माओवादीको आगामि कार्यक्रमले गर्ने छ । यद्यपि हामी आशावादी छौं ।
अन्त्यमा जनतामा के सूचना प्रवाह गर्न चाहनुहुन्छ ?
-हामी अहिले महान क्रान्तिकारी लडाईको उतारचडावका वीचमा छौं । हामीले अन्तिम तयारीलाई घनिभुत बनाउनुछ । यसखेर हामीले साहसकासाथ आमूल परिवर्तनका निम्ति लड्नुपर्छ, त्याग, तपस्या र बलिदानविना कुनै पनि कायापलट असंम्भब छ । हाम्रो गैरबशाली पार्टीले अंगिकार गरेको बाटोले मात्र घरेलु सामान्तवादको अन्त्य गर्न सक्छ र समतामूलक सुन्दर भूटानको निर्माण गर्नसक्छ । म हाम्रो गौरबशाली पार्टीको तर्फबाट सम्पूर्ण भूटानी सर्वहारा वर्ग र क्रान्तिकारी विश्वजगतलाई हाम्रो क्रान्तिलाई सहयोग, समर्थन गरिदिनका लागि हार्दिक अपिल गर्दछु ।
Posted by अर्जुन प्रधान at 2:58 AM No comments:
Posted by अर्जुन प्रधान at 6:13 AM No comments:
Posted by अर्जुन प्रधान at 5:33 AM No comments:
Posted by अर्जुन प्रधान at 5:24 AM No comments:
Posted by अर्जुन प्रधान at 6:39 AM No comments:
Posted by अर्जुन प्रधान at 6:02 AM No comments:
Posted by अर्जुन प्रधान at 4:16 AM No comments:
Posted by अर्जुन प्रधान at 6:02 AM 1 comment:
Posted by अर्जुन प्रधान at 5:19 AM 1 comment:
Posted by अर्जुन प्रधान at 5:11 AM No comments: